Huawei bụ okpueze kachasị mma na China | Gam akporosis
Huawei na Vivo ahịa kacha ere na China
Ọrịre ama ama zuru ụwa ọnụ ajụla na 2018, maka afọ nke abụọ n'afọ (na enweghị ọnụọgụ ikpeazụ). Ọ bụ ezie na ọ bụ ahịa na China ebe ahịa ndị a jiri ike kasịnụ daa, ụfọdụ atụmatụ na-ekwu na ire ahịa ga-ada site na 15%. Otu ihe na-adọrọ mmasị bụ ịmata ụzọ esi kesaa ahịa a. Enwere data ọhụrụ, nke na-ahapụ ụdị dị ka Huawei ma ọ bụ Vivo na ebe dị mma.
Ka Huawei na-ebili dị ka akara kacha ere ahịa na China. Nke a abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ha achịala ahịa mba ruo ogologo oge, mana ọ na-atọ ụtọ ịhụ ihe ụdị ndị ọzọ nwere ọnụnọ na ahịa a.
Huawei na-ewere 2017 na 2018 niile n'ọnọdụ mbụ nke ụdị ndị kachasị ere na China. Onye nrụpụta nwere oke ahịa nke 25% taa. Yabụ ọ na-abụ onye ndu na ahịa ụlọ. Ọnọdụ nke abụọ n'okwu a bụ maka Vivo, onye bilitere, mgbe ọ nọrọla nke atọ ogologo oge.
OPPO bụ nke abụọ kachasị ere ahịa na China, mana ọ ga-edozi nke atọ n'ọnọdụ a. Xiaomi bu ahia nke ano n’obodo Eshia. Companylọ ọrụ ahụ ejirila guzosie ike na ọnọdụ a, yana oke ahịa nke 13%. Ọ bụ ezie na ha dị anya site na ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka OPPO.
N'ime ndepụta a, anyị na-ahụkwa ụdị ndị ọzọ na Top 10. Samsung nọ n'ọnọdụ nke asaa, ọ bụ ezie na ha na-anọgide na-enye ala dị ka ụfọdụ akụkọ na-adịbeghị anya. Ọnụnọ Nokia n'ọnọdụ nke iri dị egwu. Ruo ọnwa ole na ole akara elebara anya na ahịa a, yana nsonaazụ ọma dị ugbu a, n'ihi na ha apụtaworị na ndepụta a.
Obi abụọ adịghị ya, a ndepụta nke kasị akpali, nke na-enye anyị ụfọdụ ozi gbasara ahịa dị na China. Ebe obu na anyi enweghi otutu data banyere obodo a. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ụdị iri kachasị ere na mba ahụ. N'ime ndị a, Huawei pụtara dị ka onye mmeri, na mgbakwunye na ịkọwapụta na 70% nke ndepụta a bụ akara ndị China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei na Vivo ahịa kacha ere na China
Otu esi edozi ihu igwe na ihu igwe na gam akporo
You chọrọ imelite Samsung Galaxy Note 9 na gam akporo 9 Pie? ị kwesịrị inwe obere ndidi